तपाईं भाग्य 500 होइन Martech Zone
आइतवार, अप्रिल २,, २०१। आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
युएसए टुडेका रोजर यूले केहि दिन अघि मात्र लेख लेख्यो कम्पनीहरु ब्लगिंग त्यागे:
सामाजिक मिडियाको उदयको साथ, धेरै कम्पनीहरूले चिम्ल उपकरणहरूसहित ब्लगहरू प्रतिस्थापन गर्दै छन् जसमा कम समय र संसाधनहरू चाहिन्छ, जस्तै फेसबुक, टम्बलर र ट्विटर।
सम्पूर्ण लेख पर्याप्त सन्तुलित छ ... तर डाटा सबै निगमहरूको अलि गलत ब्यबहारिक हुन सक्छ। पहिले, सन्दर्भ गरिएको डेटा छिटो बढ्दो फोरचुन 500०० कम्पनीहरूबाट हो। यो सहकार्य बनाम कारणको पुरानो कथा हो। कम्पनीहरू ब्लगिंग त्यागिरहेका छन् किनभने रणनीतिले उनीहरूलाई बढाउनमा मद्दत गरिरहेको छैन वा उनीहरू बढ्दै गरेको हुनाले ब्लगि aband्ग छाडदैछ?
अझै अझै धेरै प्रमुख निगमहरू छन् कि शानदार प्रकाशित गर्छन् कर्पोरेट ब्लगहरू। र म त्यस्तो व्यक्तिको जस्तो होइनँ जसले भन्ला कि ब्लगि all सबै व्यवसायका लागि उत्तम रणनीति हो। यदि तपाईं सँग एक शानदार ब्राण्ड छ, एक महान निम्न र एक बढ्दो, लाभदायक कम्पनी हुनुहुन्छ ... तपाईं सम्भवतः कर्पोरेट ब्लगको व्यवस्थापनलाई बाइपास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भन्नुको मतलब तपाईको कम्पनीले प्रयोग गर्ने कार्यनीतिहरू कर्पोरेट ब्लगि as जस्तो किफायती छैन ... तपाईले सोच्नु भन्दा बढी बजार र सार्वजनिक सम्बन्ध उर्जामा बढी समय र पैसा खर्च गरिरहनु भएको हुन सक्छ।
तर तपाईं फॉच्र्युन 500०० मा सब भन्दा छिटो बढ्ने कम्पनी होईन, के तपाईं हुनुहुन्छ? के तपाईंको कम्पनी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित छ? के तपाइँ तपाइँको उद्योग मा एक विचार नेता को रूप मा देखीन्छ? के तपाइँ एक विश्वसनीय र आधिकारिक ब्रान्ड हो कि उद्योगले सुन्नेछ? के तपाइँ खोज परिणामहरूमा हावी हुनुहुन्छ? के तपाईंसँग मार्केटिंग बजेट छ कि स्वतन्त्रताको साथ यो रणनीति अन्य साधनहरूको प्रयोग गरेर निर्माण गर्न?
स्रोतहरू दिइएमा, म मेरो कम्पनीको लागि ब्लग गर्नुपर्दैन, कि त। म सार्वजनिक सम्बन्ध, प्रायोजन, विज्ञापन र देश भर कार्यक्रमहरूमा बोल्न पुश बढी लगानी गर्न सक्छ। तर त्यो एक लक्जरी हो जुन म गर्न सक्दैन। ब्लगिंग मेरो लागि राम्रो काम गर्दछ किनकि म समय र उर्जा लगानी गर्न सक्दछु ... दुबै महँगो स्रोतहरू तर ती जुन मसँग सँधै मेरो व्यापार बढ्दै जान्छ।
लेखसँग मेरो चिन्ता यो छ कि, पहिलो नजरमा कम्पनीहरूले यो लेख हेर्छन् र यसलाई सम्भावित रणनीतिको रूपमा ब्लगि atमा नहेर्नु ठूलो बहाना हुन सक्छ। एउटा ब्लगि strategy रणनीतिमा लगानी गर्ने निर्णय फोरचुन 500०० ले के गर्दैछ भनेर हेर्नु भन्दा धेरै जटिल छ। ब्लगि is एक दीर्घ-अवधि लगानी कि समर्पण, संसाधन र रणनीति को आवश्यकता छ यसलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि।
म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछ धेरैजसो कम्पनीहरूले ब्लगिंगमा जमानत गर्दछ किनकि यसले केही ठूला कम्पनीहरूले माग गरेको द्रुत नतिजा प्रदान गर्दैन। ध्यान आकर्षण गर्न ध्यान किन्न यो सँधै सजिलो हुन्छ ... प्रश्न के काम गर्दैन भन्ने कुरा होईन, यो कुरा हो कति लामो, कति हो र किन तपाई एउटा रणनीतिलाई अर्कोमा राख्नुहुन्छ।
एउटा अर्को नोट, यो मेरो लागि आश्चर्यजनक कुरा होइन कि पेशेवर पत्रकारहरू, सम्पादकहरू र प्रकाशकहरूको साथ ठूलो मिडिया आउटलेटहरूले ब्लगि theको नकारात्मक बारेमा लेख्छन्। Just sayin!
टैग: ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिभाग्य 500भाग्य